Tapitra ve ny Wahoo Elemnt? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Wahoo elemnt amazon - vahaolana vaovao
Wahoo elemnt amazon - vahaolana vaovao
Tapitra ve ny Wahoo Elemnt?
Wahootsy manao an'ity vokatra ity intsony.
nyELEMNTMINI no maodely kely indrindra sy lafo indrindra aoWahooFitness 'teloELEMNTsolosaina bisikileta.27. 2018.
Hey ry zalahy, ity no Ray avy amin'ny DCRAINMAKER.com ary anio dia manana zavatra vaovao 9 momba ilay Wahoo BOLT vaovao 2 aho? Wahoo BOLT 2021? Wahoo BOLT
Mbola antsoina hoe Wahoo BOLT io, voalaza eo ambony boaty, fa vaovao kosa, hafa tanteraka. Manana efijery miloko izy, manana zavatra maro - ireo 'zavatra 9' rehetra horesahiko ireo. Azonao atao ny milaza fa ROAM fotsiny amin'ny fonosana kely kokoa ary 100 € mora kokoa.
Ary mety marina ny azy ireo, saingy tsy marina tanteraka. Raha ny marina dia misy fiasa maromaro ao amin'ity fitaovana ity izay tsy misy mivantana ao amin'ny Wahoo ROAM. Ka handalo izany rehetra izany aho.
Alohan'ny hitsaranao ny fitenenan'ity zavatra ity, na izany aza. BTW, tsy azoko atao ny mampiato ny bipay ka mila mandeha foana isika. Alohan'ny hanapahanao hevitra raha hividy ilay fitaovana na tsia noho ireo fiasa vaovao rehetra ireo dia alao antoka fa jereo ity lahatsoratra ity satria tsy maintsy mandalo ny sasany tamin'ireo zavatra niainako fitsapana aho satria tsy ilay endri-javatra voalohany teo amin'ilay lisitra ny sarintany feno. , eh, izao taloha, miaraka amin'ny bolongy wahoo izay ananako eto ankavia, hitanao fa toy ny zorony mainty sy fotsy amin'ny arabe, ny sarintany ary izany rehetra izany fa tsy azo aleha izy io, d.
H. tsy fantatro izay nalehanao fa mifototra amin'ny ana-nofo na torolàlana avy amin'ny mpamatsy làlana toy ny mandeha na izay mety misy, manombatombana fotsiny amin'ny roam ary amin'ny sisiny vaovao ary fantaro marina izay ny làlana ifotony dia ary tena zava-dehibe izany raha very ianao satria taloha tamin'ny lalana mihodina no nilazana taminao ny fomba hiverenanao amin'ilay zotra miaraka amin'ny zana-tsipìka kely miaraka amin'ny roaming ary ny visy vaovao dia hiteny ianao hoe ahoana no ahazoana miverena miaraka amin'ireo sari-tany ao mba hahitanao an'io rehefa namely ny terrain aho. Manana chevrons aho izay mampiseho amiko ny fomba hiverenana amin'ilay làlana uh ary manana zotra vaovao izy ary amin'ity tranga ity dia nosakanan'ny asan'ny arabe aho.
Tsy maintsy nanaraka làlana hafa aho ary niverina tany amin'ilay làlana tadiaviko ary avy teo dia nandeha tamin'ilay zavatra manaraka tao amin'ilay lisitra aho, araka ny hitanao eto, fampisehoana loko feno io. Raha ny marina dia loko 64 izy, 56 ny loko hafa noho ny rôma, ny rôma dia manana efijery miloko valo fotsiny ary manao loko mamorona volon-koditra miloko volondavenona ary izay mifanohitra amin'ny Bolts 2.0 dia fisehoana efijery 64, ankehitriny ireo loko fanampiny Ampiasaina ivelan'ny roam ho an'ny saha data vaovao marobe sy manerana ny fitaovana mihitsy, fa indrindra ho an'ireo sahan-tahiry mifandraika amin'ny herin'ny fo sy ny fo.
Ity ny fisehoana vaovao manaraka, dia ny tahan'ny fitepon'ny fo sy ny fampisehoana, izay mifangaro miaraka amin'ny tahan'ny fitempon'ny fonao sy ny faritry ny herinao mba hahitanao an'io eto amin'ny app an'ny findaiko izay ananako ny faritra misy ny fo-fo misy ahy ireo faritra misy heriko. ary ny faritry ny herinaratra miloko volomboasary-maitso manga maitso manga - afaka manisa azy ireo ho azy fa tsotra daholo izany. Toy izany koa ny fivezivezena isaky ny mandeha. Hahita loko vaovao amin'ireto ianao mba hanazavana mazava kokoa ny zava-mitranga. Tiako ho fantatra hoe impiry ny dia ao amin'ity lahatsoratra ity fa misy olona te hanisa hametraka azy etsy ambany.
Ho toy ny fifaninanana goavana izany. Ny zavatra manaraka dia ny fitomboan'ny habaka fitehirizana, ankehitriny ny mandehandeha voalohany dia nanana toerana fitahirizana efatra gigabytes, izay toa ampy nefa raha ny tena izy dia tsy izany. Mba hahafahana mitazona ny ankamaroan'ny angon-drakitra sarintany eto an-tany dia azon'izy ireo tamin'ny 16 tao amin'ny Bolt 2.0 Gigabytes ny angon-drakitra nampitomboina, izay kosa midika fa afaka mamoaka antonta-data maromaro avy amin'ny toerana jeografika isan-karazany ianao, eh, noho izany fa manana an'i Amerika avaratra rehetra ianao eropeana rehetra aostralia betsaka ny toerana hafa tsy misy fangarony koa preload ao amin'ilay fitaovana mihitsy aza manahy, raha tsy manana ny faritra tadiavinao amin'ny fitaovanao ianao rehefa tonga any aminao izany. varavarana na raha mandeha amin'ny toeran-kafa ianao dia azonao atao ny mampifandray azy amin'ny wifi fotsiny ary misafidy ireo faritra tianao.
Maimaimpoana ny sarintany rehetra na aiza na aiza ary misy sarintany manerantany ho an'ny toerana rehetra miaraka amin'ny angon-drakitra bisikileta tafiditra. Tsotra toy ny teo aloha izany, afa-tsy tsy mila manisy fanovana map kely ianao rehefa mandehandeha satria ny ankamaroan'ny faritra mety ho tsidihinao dia efa fenoina mialoha raha tsy tianao ny Ushuaia na zavatra mitovy amin'izany. Amin'ity tranga ity dia mety tsy eto amin'ny alàlan'ny toerana misy anao ny fomba iray hafa tombony an'ity habaka fitahirizana fanampiny ity dia ny fampidirana data dia nampidirina tao anaty sari-tany napetraka taloha.
Wahoo dia nanangana izany ho sasany amin'ny mombamomba ny mpanome làlana. Ka raha nanana Mazava ho azy efa voafaritra ianao, eh, ny mifanohitra amin'izay, izy io dia natsofoka tao anaty angona ho an'ny sarintany rehetra, na aiza na aiza misy anao eto amin'izao tontolo izao. Tsy afaka manao izany irery izy ireo satria tsy ampy ny toerana sisa amin'ny 16 gigs hanomezana azy ireo fahafaha-manao fanampiny hanao an'izany amin'ny angon-drakitra an-tsarintany ny fitaovana mihitsy ok ary naoty kely raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity na kitiho ny toy izany bokotra midina eo na mamandroa famandrihana mba hahasoa bebe kokoa ny haitao fanatanjahan-tena tena manampy amin'ny fantsona sy ny lahatsoratra.
Manana zavatra kely isika ao aoriany, saingy zavatra roa no horesahiko ato amin'ity lahatsoratra ity mba hialana voly fotsiny. Raha mijery akaiky ianao dia mety nahatsikaritra fa mivady ny bokotra ankehitriny izay midika fa tian'izy ireo ny mipoitra avo eh ary ho hitanao rehefa ataoko izany dia mipoitra ny bokotra, mifanohitra amin'ireo divots taloha teo amin'ny fitoerana sy ny fivezivezena eto midina ry zareo ka eh, zavatra toa izany no hita, eh ary izany no lazain'i wahoo, indrindra ho an'ireo olona manao fonon-tànana, mora kokoa ny miomana hamely an'ireo bokotra ireo, ary ekeko fa misy olona toy ireo divot ireo. Nahita azy ireo foana aho nahatsiravina ka tiako ireo bokotra vaovao ireo, mora kokoa ny manosika azy ireo ary fantatrao fa tianao izy ireo, apetraho ao anatin'io lavaka kely io ny rantsan-tànanao ary manantena aho fa hampandeha ny zava-drehetra na dia tsy hita any amin'ny toerana hafa aza ilay izy. ny lanjany dia nitombo kely nefa mbola ambany noho ny hafa eh, ka eto dia hitanao raha mandeha aho ary manome fifandanjana mba hidiran'ny bolt misy mba hanala ny aloka any 61 grama an'ny baomba vaovao dia misy 70 grama ny zana-borona kely romana dia tonga miaraka amin'ny 94 grama hampitahanao ny sisin'ny akanjo amin'ny 530 eo ho eo amin'ny 20 dolara eo ho eo dia 79 grama eo, noho izany fantatrao fa somary mavesatra kokoa izany, saingy tsy dia zava-dehibe loatra izany. somary lehibe kokoa ihany koa, raha mijery akaiky eto ianao dia hitanao fa mandroso kely kokoa any ivelany izy io, somary matevina kokoa noho izany, ka ataoko izany cht heveriko fa tsy dia maninona ho an'ny ankamaroan'ny olona izany, fa amin'ny tranga manontany tena ianao izao, aza gaga rehefa miresaka zavatra hafa novain'izy ireo teo ny usbc-charge ity varavarana kely ity koa dia azo soloina taloha raha sendra nandrovitra ny varavaranao ianao dia tsy ho eo intsony ny varavaranao Tsy misy varavarana intsony raha oharina amin'izay dia azonao atao ny mamadika azy ireo raha vitanao ny mamiravira anao ary ny fitaovanao tsara izao.
Ataovy ao an-tsaina fa ity seranana ity dia mbola ipx7 tsy tantera-drano, midika izany fa afaka milatsaka ao anaty lakandrano amin'ny metatra mandritra ny 30 minitra ianao ary ho salama ary ho tsara amin'ny orana koa, tahaka ny nanandramako tsara, anisan'izany ny aa ora vitsy lasa izay tsy misy olana na tsy misy olana izany amin'ny varatra havandra dia milamina ny zava-drehetra ankehitriny miaraka amin'ny seranan-tsambo USB-C misy ny entana manaraka izay miakatra haingana ka manana USB Fast -C fiampangana haingana handrosoana izy ireo ary handoa izany tanteraka, um misy enta-mavesatra hafainganam-pandeha dimy haingana kokoa na hatramin'ny enta-mavesatra dimy mifanohitra amin'ireo 1.5 amps teo aloha, inoako fa tsy olana lehibe ho an'ny ankamaroan'ny olona izany toy ny zavatra hafa, indrindra amin'ny solosaina bisikileta tianao avela io mandoa vola vetivety, fa mora ampiasaina rehefa mila maka vola haingana eto ianao alohan'ny hiainganao, mamonjy anao vetivety dia andao amin'ny toerana farany alohan'ny hiresahantsika kely momba ny fitoniana sy ny entana. Ny studiko dia mametraka fotsiny ny firmware, izay tapaka ny fotoana hanaovana azy, saingy tsara izany, ka nanitatra ny isan'ny serivisy SMS tohanan'izy ireo izy ireo mba hampisehoana fampandrenesana amin'ilay fitaovana ihany.
Ka taloha dia nandefasan'izy ireo SMS fotsiny, izao dia nampiany hoe ho toy ny fantsom-pifandraisana WhatsApp sy telegrafy izay tena halefa any amin'ireo fitaovana Wahoo teo aloha ihany koa. Ka tsy voafetra amin'ny bolt fotsiny io. Midika izany fa raha mieritreritra ianao fa nampifangaro ny telefaoninao dia hahazo ireto fampandrenesana ireto amin'ny fitaovana ianao.
Tsy misy fifandraisana an-tariby amin'izany ka mila tonga eto amin'ny telefaoninao izy io ary mihorakoraka fotsiny ary mampiseho anao ny fandefasan-kafatra tsara, noho izany miaraka amin'ny zava-baovao rehetra tsy maintsy horesahintsika satria somary masiaka ity, izany angamba no zavatra ratsy indrindra nataoko ' efa nanao andrana computational nandritra ny fotoana ela, angamba na ny fanandramana fitaovana aza, ary azoko tsara fa io dia toy ny olana mitete ary fantatrao, indray andro any, ary angamba tsy ho ela, eh, hanamboatra ireo zavatra ireo ry zareo, eh, satria izy ireo tsy maintsy tiavina fa tsy afaka mivarotra azy ireo izy ireo raha tsy mivarotra azy, fa manomboka mivarotra azy ireo raha vantany vao mandeha ity lahatsoratra ity. Nanomboka nivarotra azy i Wahoo, azoko atao ny mandeha any amin'ny fivarotako bisikileta eo an-toerana, mpivarotra wahoo lehibe toy ny zato metatra miala eo aho ary mividy an'io fitaovana io avy hatrany ary mitaingina azy ary satria mijoro ho ahy izao dia tsy misy ilana azy mihitsy ary izaho Maniry aho raha te hanana tantara tsara hosodoko, saingy amin'ny farany ny andro dia tsy afaka miala amin'ny kapila aho raha tsy mirodana indray mandeha na indroa ny fanamboarana matetika dia maharitra 30 ka hatramin'ny 90 segondra no tara ary ny fanaovana saritany ireo sahan-tahirin-kevitra ihany. naterak'ireo fizarana Strava taorian'ny nahavitako ireo fizarana Strava rehefa naseho ireo tamiko dia manomboka faritra iray aho ary nahavita izany kilaometatra lasa izay. Amin'ny tranga sasany dia nitaingina fiara omaly aho fa tena ratsy izany ary tsy nilaza akory aho hoe tsy mandeha amin'ny lalana enina kilaometatra, nitondra fiara an-tongotra enina kilometatra ara-bakiteny aho alohan'ny nieritreretako zavatra mety tsy nety ary rehefa avy nijery ambany aho dia nilavo lefona ary azoko toy ny azoko antoka ary tsy azoko antoka fa fantatro fa miasa ao aminy i wahoo.
Manana injeniera roa aho manandrana mamantatra izany eh fa amin'ny farany ny orinasa dia mandefa valiny marina momba ny zavatra homena anao ary nanandrana nanao fitsangatsanganana nahomby tamina dia iray nandritra ny herinandro aho. Te-mitaingina fotsiny aho izay iasan'ny zava-drehetra ary tsy fantatro raha tsy fahombiazan'ny sensor amin'ny tahan'ny fo na tsy fahatomombanan'ny mpampiofana na tsy fahombiazan'ny metatra na tsy fahombiazan'ny fitaovana na fianjerana ary hamerina na karatra toa tsy azoko atao mitaingina madio ary fantatro ny sasany olona azoko fantarina ve fa misy olona atokisako ireo mpijery toa ny desfit sy gp lama izay taloha ary tena tsara vintana tamin'izany? tsara ary mety any amin'ny toerana onenan'izy ireo sy miresaka amin'i wahoo izy ireo. Heverin'izy ireo fa mifandraika indrindra amin'ny haben'ny zotram-bisikileta sy ny antsipiriany izay ananako sy ny taila misy sarintany amin'io faritra manokana io ary mipetraka any Amsterdam aho ary eto afovoan'i Amsterdam dia be dia be izany zavatra izany ary izy ireo ihany no mihady azy. manantena aho fa hahalala izy ireo fa tsy haiko hoe rahoviana izany ary mety ho rahampitso tolakandro ara-bakiteny io, ny fotoana taorian'ny nametrahana ity lahatsoratra ity, na afaka iray volana na afaka roa volana ary fantatro fa tsy izany 'T, ka ny tiako holazaina dia ny manampy fanavaozana ny famaritana etsy ambany.
Eo no ahitanao raha raikitra ity olana ity na tsia, azonao atao ihany koa ny mahita ny famerenako feno na izay mety ho izy, hampifandray eto ambany aho. Hanana fizarana iray natokana ho an'ity lohahevitra ity aho ary raha ary rahoviana no raikitra ary antenaina fa namboarina izy io ary toa tsy misy fiatraikany amin'ny olona rehetra izany na iza na iza toa ahy, um, lavitra na lavitra mipetraka lavitra ny tanàna iray nefa mihevitra izy ireo fa mandamina izany, raha toa ka fantany tsara izany rehetra izany dia toa safidy tsara eo amin'ny lafiny Wahoo ity izay somary ambany kokoa ny vidiny, araka ny nolazaiko, ary hitako fa lafo loatra izany. nandritra ny fotoana ela raha ampitahaina amin'ny Garmin 830 izay mitovy vidiny ihany ary eto ny Garmin 530 dia mitovy ihany koa amin'ny vidin'ny lohahevitra ankapobeny eo amin'ny fisafidianana an'i Wahoo sy Garmin ary misy safidy maro hafa any ivelany any misy dingana miaraka amin'ny ny m50 aza mora vidy kokoa noho ity izy ity heveriko fa misy ny hammerhead crew 2 amin'ny vidiny somary avo kokoa amin'ny vidin'ny wahoo roam, safidy lehibe daholo izy ireo manerana an'ity tontolo ity, saingy heveriko fa betsaka ny olona mifindra eo anelanelan'i Wahoo ary Garmin ary dia amin'ny farany dia tonga amin'ny fahatsorana miaraka amin'ny tontolo iainana Wahoo na fampiasa bebe kokoa amin'ny ekosistema Garmin. Tsotra izany ary azon'ny olona atao ny mifanakalo hevitra mandritra ny tontolo andro fa amin'izao fotoana izao, toy ny politika, ny hany zava-dehibe dia tsy misy fisehoan-javatra manandanja na tena vaovao raha ny resaka lozisialy ao amin'ny Bolt 2 no ampitahaina amin'ny roam izay tamin'ny ankapobeny nijanona. toy izany ihany nandritra izay roa taona lasa izay ka raha tsy navelako hanavaka izany dia hiteny aho fa hifantoka amin'ny fanovana fitaovana.
Eto ny endrika endrika ny loko u h mazava ho azy ny nanampy fanampiny saha data data, ohatra ny mpamily lehibe raha oharina amin'ny mandehandeha ny tenany. Antenaina fa nahita izany mahaliana mahasoa ianao na amin'ny fomba hafa na amin'ny fomba hafa. Raha izany, mandrosoa ary mankafy ny bokotra etsy, na manorata anarana hisoratra anarana momba ny hatsaran'ny teknolojia fanatanjahantena bebe kokoa, betsaka ny ho avy, betsaka ny ho avy.
Manantena aho fa hanana fanavaozana an'io amin'ny fotoana iray ihany koa, saingy misy zavatra maro hafa ao amin'ny fantsona koa, azo antoka fa tsara izany
Manana GPS ve ny singa Wahoo element Bolt?
Mora ny miditra amin'ny bokotra eo amin'ny sisin'ilay singa dia mamela anao hanao zoom in sy ivelan'ny sehatry ny angona misy kitika fotsiny. IntegratedGPSmiaraka amin'ny sarintany tsotra sy mazava ho an'ny fitetezana mora foana na aiza na aiza misy anaodiaeto amin'izao tontolo izao.
Inona no izy, io no Ali Tariq eto amin'ny SMARTBikeTrainers.com Mampahafantatra loko isan-karazany, tena tsy nanavao ny ELEMNT BOLT i Wahoo hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2017. Ka ity ary, ilay ELEMNT BOLT vaovao sy havaozina.
Amin'ity lahatsoratra ity dia handeha hitety anao amin'ny zava-baovao aho amin'ny ELEMNT BOLT sy ny maha samy hafa azy amin'ny BOLT voalohany. Nefa alohan'ny hiroboroboantsika, raha hitanao fa manampy amin'ny fomba rehetra ity lahatsoratra ity, makà segondra vetivety hanindriana ny bokotra 'Tiako' etsy ambany. Manampy be dia be ny fantsona izany ary mieritreritra ihany koa ny hisoratra anarana mba tsy hahadino lahatsoratra misy anao Raha hitanao fa mahaliana ny ELEMNT BOLT ary manapa-kevitra ny hividy iray ianao, manana rohy aho ao amin'ilay famaritana, rohy afiliana manohana ny fantsoko ary tsy mandany vola izany. na inona na inona fanampiny.
Ny zavatra voalohany ho hitanao amin'ny ELE MNT BOLT dia endrika vaovao aerodinamika marevaka izay fantatry ny BOLT. Ny BOLT vaovao dia somary lava kokoa, roa milimetatra katroka lava noho ny sary famantarana BOLT tany am-pita. Ny efijery dia 240 x 300 teboka, fisehoana loko 64 miaraka amina sensor sensor manodidina izay manitsy ny famirapiratan'ilay efijery amin'ny manodidina azy.
Na dia mitovy amin'ny BOLT voalohany aza ny haben'ny efijery dia toa somary lehibe kokoa ilay vaovao satria mipetraka eo amboniny ny vera ary manarona ny faritra manontolo. Wahoo dia mampiasa loko sy fitetezana, haavo, fampandrenesana, fampihetseham-batana, faritry ny herin'ny fo sy ny fo ary ny sehatry ny angona. Ny interface interface vaovao nohavaozina dia mampiseho sehatr'asa misongadina izay azonao ampidirina ao anatin'ny. afaka manamboatra ny fampiharana Wahoo ELEMNT amin'ny findainao.
Ny tabilao bokotra dia mbola mitovy ihany, bokotra telo eo an-tampony, roa eo anilany ary ny bokotra herinaratra amin'ny lafiny iray. Ny bokotra herinaratra amin'ilay BOLT vaovao dia somary lehibe kokoa noho ilay ELEMNT BOLT tany am-boalohany. Ny bokotra telo eo an-tampony dia atsangana ankehitriny, tsy mitovy amin'ny BOLT teo aloha izy io ary na dia ny ROAM ELEMNT aza.
Raha manavao amin'ny BOLT teo aloha ianao dia mety hahatsapa ho hafahafa ihany ny firafitry ny bokotra tamin'ny voalohany, saingy hitako fa mora kokoa ny manosika. Ny ELEMNT BOLT dia manana bateria lithium-ion miaraka amin'ny faharetan'ny 15 ora, izay mitovy amin'ny BOLT tany am-boalohany. Mitovy amin'ny entana hafa, ny seranan-tsambo dia ao ambadiky ny varavarana vita amin'ny fingotra ao ambadiky ny fitaovana, fa izao kosa dia port USB-C, izay mahafinaritra ny mahita.
Ankoatr'izay, Wahoo dia mampitombo ny fitadidy an-tsambo ho 16 gigabytes. Io dia ahafahanao mitahiry sarintany sy zotra hahazoana fidirana haingana, indrindra rehefa tsy eo akaikin'ny ELEMNT BOLT ny findainao dia mitodika isaky ny mandeha. Mitovy amin'ny ELEMNT ROAM, ianao izao dia manana fampisehoana sarintany miloko feno amin'ny safidy fitetezana maro.
Ao amin'ny pejy fifidianan-dàlana dia azonao atao ny manondro ny ambanin'ny tany na ny lakroa, ny hybrid, ny MTB na ny arabe dia afaka mamonjy toerana toa ny tranonao hahazoana fidirana haingana avy amin'ny efijery menio mba hisafidianana haingana ny toerana voatahiry sy hitety. Endri-javatra mora ampiasaina, indrindra rehefa any amin'ny faritra vaovao ianao na mandeha amin'ny dia, ka rehefa mitondra lalana bisikileta noforoninao ianao na nisy olona nizara taminao dia hamorona làlana mankany amin'ny teboka fanombohana ilay singa. Araho ny zotra, ity safidy ity dia hamerina anao amin'ny ankapobeny, hitondra anao hiverina amin'ny fomba nidiranao io ihany.
Mizotra mankany amin'ny fanombohana, fa tsy mamerina ny làlanao amin'ny lalana nalehanao dia hanandrana ny hiverina ny lalana fohy indrindra hiverina amin'ny fanombohan'ny dianao Under 'Ento aho.' Manana ny lisitry ny toerana voatahiry ianao na Mitadiava toerana vaovao amin'ny sari-tany ary avelao ny ELEMNT hamorona làlana ho anao. Raha tsy manana toerana voatahiry ianao, ny zavatra tsara indrindra tokony hatao dia ny fampiasana ny app ELEMNT amin'ny findainao ary afaka mampiditra adiresy marina ianao, fa azonao atao koa ny manao izany mivantana amin'ny fitaovana, dia ho hitanao io kisary fikarohana io. ary azonao atao ny mivezivezy any amin'izay tianao sy mifidy azy.
Ary ny ELEMNT dia hamorona làlana ho anao. Azonao atao koa ny mampiasa ny fampiharana ELEMNT hamoronana làlana avy amin'ny tantara amin'ny alàlan'ny fisafidianana iray amin'ireo dia nataonao taloha. Ny BOLT dia ANT + sy Smart Bluetooth mifanentana aminy, noho izany dia azo ampifandraisina amina sensor izay mandefa amin'ny alalàn'ny Bluetooth na ANT +.
Ary afaka mitantana sensor mivantana eo amin'ny fitaovana ianao na amin'ny alàlan'ny rindrambaiko Wahoo. Heveriko fa ny majika an'ny ELEMNT dia tsy ny endriny kely fotsiny ho an'ny mpitaingina bisikileta, fa ny fampidirana azy amin'ny ekosistia Wahoo sy ny fahatsorana hampiasaina, azonao atao ny mifehy tanteraka ny ELEMNT ary manamboatra azy amin'ny fampiharana mpiara-miasa ELEMNT. Ary io no mampiavaka ny BOLT sy ny solosaina ELEMNT hafa? Fa rehefa manana bokotra enina fotsiny ianao amin'ny fitaovana, dia mety ho sarotra ny mamaky sy manamboatra ny efijery ary ny sehatry ny angon-drakitra rehetra, indrindra fa ny fitaovana toa an'ity iray ity dia mihombo hatrany miaraka amin'ireo endri-javatra sy fampiasa amin'ny edmit.
Ary tsy misy fisarahana eo amin'ny rindrambaiko mihitsy sy ilay fitaovana. Raha manana ny famantaranandro mpifanandrina Wahoo ianao dia azonao atao ny mametraka azy io mba hampisehoana ny tahan'ny fitempon'ny fon'ny otrikaranao amin'ny ELEMNT amin'ny alàlan'ny solosaina. Na ny safidy Multi -Sport sy ny asa fanolorana izay ahafahanao mivadika mora foana amin'ny filomanosana mankany amin'ny bisikileta sy bisikileta mankany amin'ny fihazakazahana nefa tsy manindry bokotra iray.
Raha miresaka momba ny ecosystem, raha manana Wahoo KICKR ianao, ny ELEMNT dia fitaovana tsara ampiasana amin'ny Wahoo KICKR Smart Trainer anao, azonao atao koa ny mampifangaro azy amin'ny kaonty fampiofanana avo indrindra anao ary manafatra ireo fanazaran-tena kasainao hatao ary mitaingina maody ERG. Ny ELEMNT BOLT dia $ 280 ary misy ao amin'ny Wahoo ary misy ny mpivarotra Wahoo hafa mividy ny anao. Ireo dia rohy mpiara-miasa manohana ny fantsoko, nefa tsy mandany vola akory ianao.
Izay ny momba an'io. Raha hitanao fa mahasoa ity lahatsoratra ity, azafady maka segondra kely hanindriana ny bokotra Like. Manorata anarana ihany koa raha nanao an'ity lahatsoratra ity farany ianao ary mbola tsy nisoratra anarana.
Misaotra nijery ary hahita anao amin'ny lahatsoratra manaraka izahay. (mozika manaitaitra)
Inona no tonga miaraka amin'ny bolt Wahoo Elemnt?
ELEMNT BOLTdia alefa amin'ireto manaraka ireto:
ELEMNT BOLTGPS Bike Computer.
Cable Micro USB mahazatra.
(2) Fiakarana bisikileta (avy eo aloha sy fotony)
tongasoa eto amin'ny 2gc unboxing amin'ity herinandro ity fa manana vokatra vaovao be dia be izahay hampisehoana aminao fa io ilay mpampiasa solosaina boltis gps ary misy zavatra be dia be eto izay mila manafaingana azy noho izany asa tsara izany, saingy izao no ny lohan'habakabaka aerodinamika indrindra eny an-tsena mahita izay fantatr'izy ireo, okay, mandroso haingana amin'ny GCunboxing mazava ho azy fa hanome Aramis yaki isika amin'ity minitra ity, fa tsy izany ihany fa hanana mpandresy telo hafa koa isika, ny tsirairay amin'ireo singa zanabolana ireo bolts voaray, marina izany! Holazaiko aminao ny fomba hidirana amin'ny faran'ny lahatsoratra, fa izao raha mandany fotoana kely fotsiny isika hankafizako azy dia tena mahafinaritra tokoa, eny, ampy izay, andao jerena tokoa ireo singa, ho eo ve isika amin'ny voninahiny rehetra , zahao ity mba tena hitantara ny tantara, na dia tsy maintsy ampidirintsika amin'ireo havoany aza izany hamenoana ny sary aero jereoWow iza no nahatsapa fa mpitaingina bisikileta tamin'ny vanim-potoana vonarrow mahita antsika indray izahay izay ahafahanao mandany ara-bakiteny an'arivony maro hitahiry vola amin'izay na raha ny tena marina ny fananana fanafihana ady totohondry generika eo alohan'ireo kitapom-batsy dia tsy hetsika faran'izay hendry indrindra ka naka ny tolotr'i Katz Anis avy amin'ny manam-pahaizana momba ny aerodynamika Dimitri izy ireo, izay atidoha ao ambadiky ny fahombiazan'ny GBteam, ary miaraka amin'ny endriny hoy izy ireo dia namonjy anao ary antsasaky ny watt amin'ny 21 mph fotsiny, raha jerena ny ankamaroan'ny fitsapana amin'ny faritra dia vita amin'ny 25 na 30 mph aza, izay fitehirizana manan-danja tokoa, ary avy eo avelao ny zana-tsipìka iray ho fotoana fohy fotsiny ho estetika an'ny tendrombohitra iray izay mifangaro tanteraka miaraka amin'ny lohan-dohanao dia fikitika mahafinaritra ary raha irinao raha mitaingina ny voaly piraty Vanex ianao na zavatra iray dia azonao atao ny manamboatra ara-bakiteny ilay bracket sy mpanara-maso amin'ny alàlan'ny fametahana ny bracket mankany amin'ny stud ary avy eo tsy afaka esorinao, dia andao atao izany. Mbola betsaka kokoa ny mandeha izao andao hivadika ilay lozam-pifamoivoizana ary rehefa mafana izy dia hampahafantariko anao an'ity telefaoniko ity ny antony anaovako an'io dia ny bibikely ary ny telefaona mifandraika aminay satria ity dia amin'ny alàlan'ny App escort izay mampiasa ny herin'ny ny findainao finday avo lenta hanokatra fampiasa vaovao ary rehefa tianao ny hampahafantarina anao izay misy koa Miaraka amin'ny findainao mandeha ao am-paosinao, azonao atao ny mamono azy raha tianao, azonao atao ny manangana pejy valo ny angon-drakitra handehanana hamaky ilay boaty, ny fampahalalana tsirairay hatramin'ny sivy an-toerana fa tsy handany ora amin'ny bokotra bokotra, ny fikitihana sy ny horonan-tsarimihetsika amin'ny safidinao dia safidy mivantana fa tadidio fotsiny fa rehefa mandeha bisikileta ianao dia tokony handany ti izaho mijery ny arabe fa tsy iray amin'ireo sehatr'asa 72 samihafa mety ho hitanao Ireo bokotra roa ireo eo amin'ny sisin'ny fitaovana dia mety nanao safidy hafa satria izy ireo dia toy ny zoom dia azonao atao ny manakaiky sy mivoaka ny sahan-tahirinao, izay tsara indrindra, koa isika izay tia elanelam-potoana tena mafy sy mafy dia mafy amin'ny fampisehoana satria raha vao manomboka misosa amin'ny trosan'ny oxygen ianao dia afaka mahita fa mbola mifantoka amin'ny tanjon'ny fahombiazanao. Misy jiro LED kely ihany koa izay milalao etsy ambony hanampy anao hahafahanao mametraka azy ireo hifandraika amin'ny faritry ny herinao, na ny fon'ny tahan'ny fonao, na ny hafainganam-pandehanao mifandraika amin'ny hafainganam-pandehanao an'io dia io, ary eo am-piasana dia mahatsapa izany somary mitovy amin'ny tachometre, ka rehefa tena mandeha mafy amin'ny pedal ianao dia manjary mena ny jiro izay mitovy ihany raha miditra amin'ny mena mena ianao ary avy eo miasa ihany koa ny jiro rehefa mampiasa fitetezana ianao dia endrika lehibe iray hafa an'io ny boaty elanelana wha-hoo dia mihodina mankamin'ny pejin-tsarintany ary mandeha ilay singa tariby ary ity tariby sy ny bolt ity dia samy mampiasa ny sarintany misy loharano mivelatra izay midika fa ity fitaovana ity dia misy sarintany eran-tany efa napetraka ary koa manome anao ny lalana hitodihanao rehefa mampakatra ianao manome làlan'ny zavatra toy ny mitondra fiara amin'ny gps na ny fivezivezena izy ary avy eo milentika ihany koa. Ny sisa ataonao dia ny manome alalana ireo fampiharana ireo amin'ny app miaraka aminao eto, avy eo izy ireo dia hasiana fampitahana an-telefaona an'ity telefaoninao ity ary avy eo dia ampakarina amina fitaovana iray rehefa miditra amin'ny Wi-Fi ianao - tsy isalasalana fa iray amin'ireo karatra valo amin'ity ny fiarahana miasa dia ny fahafaha-mitondra anao amin'ny alàlan'ny findainao, fa rehefa mahita toerana ianao dia azonao atao ny mametraka pin na manorata amin'ny adiresy, na mikaroka zavatra toy ny kafe na labiera ary rehefa eo ianao ny fipihana eo aminy dia hampakatra lalana iray ary hanome anao tari-dalana isaky ny miverina mandra-pahatonganao any.
Azonao atao, satria vao avy nandehandeha aho na nahita ny endri-javatra Livetracks tao, ary manome anao ny fahaizana hizara ny toerana misy anao sy ny làlan-kalehanao amin'izay tianao, fa avy eo azonao atao koa ny mahita ny toerana misy ny wireusers hafa avy eo amin'ilay pejin-tsarintany. na oviana na oviana fitaovana hikarantsana ihany koa ary raha arotsakao izy ireo ary ho hitanao hoe aiza izy ireo eo am-piandrasana ao amin'ny cafe na mahazo latsaka ianao, dia ho hitanao hoe aiza no fivarotana kafe niandrasanao. Nolazaiko teo aloha fa azonao atao ny mampifandray ny fitaovana misy zotram-pitaterana Strava Force Travel, fa afaka mahazo fizarana mivantana ihany koa ianao. Ka rehefa manomboka fizarana ao Strata ianao dia hiaraka amin'ny fitaovana misy anao avy hatrany ary hampandre anao rehefa manakaiky an'io sehatra io ianao ary avy eo mitazona anao hatrany ny fivoaranao amin'ny Komor na ny PB anao dia mitondra izay nolazaina taminao fa izahay mila miasa haingana eto, raha tsindrio ny fijanonanao eo amin'ny fitaovanao rehefa vita ny dianao, dia ampidiriny ao anaty ilay app miaraka amin'ny findainao avy hatrany ny lalana mankany Strava na ny tampon'ny fiofanana na ny toa azy raha efa nomenao alàlana io avy eo inona koa no holazainay aminao, tsy misy rano IPX8, izay midika fa afaka alentika ao anaty rano hatrany amin'ny 1,5 metatra izy, izay tokony hiarovantsika tena amin'ny puddle ratsy indrindra nataon'i Polly izay antenainao mandritra ny dia ary avy eo ny ain'ny bateria angamba na ny ampahany manandanja indrindra dia eo anelanelan'ny 60 grama fotsiny ny bateria. Toa maharitra 15 ora ny bateria Raha manana mpanazatra wahoo koa ianao dia azonao fehezina miaraka amin'ity fitaovana lohan'ny bolt lineelement ity Eny, tsy izany rehetra izany no mampiavaka azy s gps solosaina no tiako holazaina, tsy mbola nijerijery ilay boaty akory aho ary niresaka momba an'io sy izany ary ny zavatra hafa rehetra ao fa raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao dia misy foana ny tranonkala fotsy raha te hahafantatra bebe kokoa ianao Fa amin'izao fotoana izao Miloka aho ary milaza fa tena te hahalala fomba hifaninanana ianao, eto dia eto amin'ny famaritana an'ity horonan-tsary ity misy rohy, kitiho izany rohy izany ary hiditra ao amin'ny sari-tanin'ny fifaninanana ianao izay indrisy fa hamaly a Fanontaniana sarotra devoly ka antenaiko fa efa nandinika ianao, na dia betsaka aza ny fampahalalana momba an'io eto dia mila maka antoka ianao fa efa nisoratra anarana tamin'ny GCN alohan'ny hitsidihana.
Mba hanaovana izany, tsindrio fotsiny eto an-tany ary avy eo amin'ny atiny hafa. Maninona raha tsy izany, raha te hahita adihevitra momba ny fiofanana an-trano sy an-kalamanjana sy ny fahamendrehany ianao dia tsindrio fotsiny etsy na tsindrio fotsiny ny seho GCN farany teo
Mendrika ve ny mandehandeha any Wahoo?
nyWahooELEMNTmandehandehasinga iray tena tsara ary mendrika hipetraka amin'ny faran'ny premium amin'ny tsenan'ny GPS bisikileta. Fahafinaretana mitaingina miaraka; efijery tena tsara, bokotra lehibe sy voapetraka tsara, sarintany mivaingana ary fitetezana, fampidirana malalaka, ary fisehon'ny Strava / fiofanana tsara.
Tokony hahazo bolt Wahoo ve aho?
Raha mampiasa ny sarintany an-tserasera tsy tapaka ianao ary maniry faritra somary lehibe kokoa hanehoana ny fitetezana anao, ny Elemnt Roam dia mety ho ilay safidy manintona kokoa. Na izany aza, raha mitana lanja amin'ny fihenan'ny lanja sy ny dragona aerodynamika ianao, dia ny ElemntBoltmety ho ny safidy tiana kokoa.25 2021.
Ahoana no hanavaozako ny roam-paty Wahoo?
Fampandrenesana ho an'ny firmware vaovaovaovao faranyalaina ho azy rehefa mifandray amin'ny WiFi amin'ny fanombohana. Raha tsy izany, afaka atao tanana ianaovaovao faranyfirmware avy amin'ny menio fanovana toy ny aseho etsy ambany. Hamarino tsara ny ELEMNT / BOLT /mirenirenymandeha amin'ny herinaratra, voadidy tsara ary mifandray amin'ny WiFi tsy miankina amin'ny findainao.
Tsara kokoa noho i Garmin i Wahoo?
Famaranana: Amin'ny maha fitaovam-piofanana azy ireo, dia mitovy tsara izy ireo. Raha ny momba ny fampiofanana TrainerRoad ivelany, dia tiako nyWahoo. nyGarmindia fitaovana avo lenta ara-teknika, miaraka amina endri-javatra marani-tsaina maro, faWahoodia mialoha eo amin'ny lafiny fahaizan'ny mpampiasa. Raha voatery misafidy iray aho, dia aleoko mifidy ilayWahoo.3 2020.
Inona ny fiainana bateria ao amin'ny mandehandeha any Wahoo Elemnt?
nybateriadia voalaza faFARANYhatramin'ny 17 ora, miaraka amin'ny famirapiratan'ny fampisehoana ahitsy ho azy amin'ny alàlan'ny sensor ambient.
Tokony hahazo bolt Wahoo na roam ve aho?
Raha mitady sarany feno haingana ianao ao anatin'ny fotoana fohy araka izay azo atao, diaBoltmandresy fotsiny. Fa hatramin'nyRoam'sny batterie lehibe kokoa dia midika fa tsy tokony andoavanao izany matetika ianao, ary ny fotoana iampangana azy dia tsy ambony kokoa, nymandehandehaangamba no safidy tsara kokoa amin'ny ankapobeny.05.25.2021
Iza no tsara kokoa Garmin sa Wahoo?
Famaranana: Amin'ny maha fitaovam-piofanana azy ireo dia mitovy izy ireotsara. Raha ny momba ny fampiofanana TrainerRoad ivelany, dia tiako nyWahoo. nyGarmindia fitaovana avo lenta ara-teknika, miaraka amina endri-javatra marani-tsaina maro, faWahoodia mialoha eo amin'ny lafiny fahaizan'ny mpampiasa. Raha voatery misafidy iray aho, dia aleoko mifidy ilayWahoo.03.05.2020
Misy fampiharana ho an'ny Wahoo Elemnt?
Ny rindrambaiko mpiara-miasa maimaim-poana amin'i Wahoo dia manamboatra ny pairing ary mitantana ny fizotran'ny fikirakirana ho an'ny fametrahana maimaimpoana maimaimpoana. Fampidinana sy fampidinana làlana mandeha ho azy raha ampifandraisina amin'ny fampiharana antoko fahatelo mifanandrify (Strava, RideWithGPS, Best Bike Split, Komoot, sns).
Ahoana ny fiasan'ny Wahoo Elemnt miaraka amin'i Strava?
Ampiasao ny ELEMNT hifehezana ireo mpanazatra Smart W-non izay misy ANT + FE-C. Mifangaro tanteraka amin'ny Strava Live Segments hanome anao sata mifehy marina sy ny Final Push handresy ny tanjonao. 100% Wireless - ampidiro fotsiny izy io hikarakarana azy io! Mandrindra, mahazo ary manosika angona amin'ny alàlan'ny ANT +, Bluetooth ary Wi-Fi.
Inona ny fiainana bateria ao amin'ny Wahoo Elemnt?
Manamboara lalana ary mahazoa fampandrenesana pop-up sy LED eo amin'ny efijery mba tsy hahadiso anao mihodina mihitsy. Mifangaro tanteraka amin'ny Strava Live Segments hanome anao sata mifehy marina sy ny Final Push handresy ny tanjonao. Fiainana bateria - azo alaina (Hatramin'ny 17 ora). Fanamarihana tsy tantera-drano - IPX7 (Waterproof hatramin'ny 5 ft) 100% Wireless - ampidiro fotsiny izy io hikarakarana!